Prodium (Phenazopyridine) – Health32
Home P	Prodium (Phenazopyridine)
What should I discuss with my healthcare provider before taking Prodium (Phenazopyridine)?
What are the possible side effects of Prodium (Phenazopyridine)?
What other drugs affect Prodium (Phenazopyridine)?
What happens if I overdose on Prodium (Phenazopyridine)?
What happens if I miss a dose of Prodium (Phenazopyridine)?